Smart Film၊ Quartz Glass၊ Quartz Glass Rod၊ Beveled Glass - Hongya
Tempered Glass ထုတ်ကုန်များ
Tempered Glass စင်
Tempered Glass စားပွဲထိပ်
Quartz glass ထုတ်ကုန်
အဝိုင်းပုံ ရောနှောထားသော ဂလင်းကျောက် အကြည်ပြား
Dichroic coating quartz ဖန်ပြား
Dichroic coating quartz ဖန်ပြွန်
3D ပရင်တာ borosilicate ဖန်စာရွက်
Float Glass အကြည်
အရည်အသွေး ပထမ၊ ဘေးကင်းကြောင်း အာမခံပါသည်။
2mm 3mm 4mm 5mm 6mm dielectric တီဗီမှန်မှန်
ထုတ်လုပ်မှုဖော်ပြချက် အမည် Two Way Mirror Glass (ပြသရန်အတွက် Mirror Glass အသုံးပြုမှု) အရွယ်အစား 600*900mm၊ 800*1200mm၊900*1400mm၊ 1830*2440mm စသည်ဖြင့် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား အထူ အထူ နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုများ-2mm၊3mm၊4mm 5mm။ 6mm၊ 8mm Color Silver Temperable Yes Reflectance 70% Reflective၊ 16% Transparent Sample ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများ၏ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ပမာဏဖြင့် အခမဲ့နမူနာများကို ပေးဆောင်ပါမည်။ Application Smart Mirror၊ Magic Mirror၊ Tv Mirror၊ Display၊ Touch Display...
Beamsplitter Glass / Teleprompter Glass 3mm နှင့်...
အဝိုင်းထောင့် Beamsplitter မှန်ပါရှိသော 3mm 4mm 5mm Teleprompter mirrorglass စာရွက်သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော နည်းပညာမြင့်မှန်မှန်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မှန်ရဲ့တစ်ဖက်က တောက်ပြောင်နေပြီး နောက်တစ်ဖက်က အမှောင်က မှောင်နေပေမယ့် နောက်တစ်ဖက်ကို မကြည့်နိုင်တာကြောင့် အကဲခတ်သူတွေက တည့်တည့်မြင်နိုင်ပေမယ့် တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် လူတွေမြင်နိုင်တဲ့ ပုံမှန်မှန်တစ်ခုပါပဲ။ . ကုန်ပစ္စည်းအမည် Tempered low iron one way mirror glass...
8 မီလီမီတာ 10 မီလီမီတာအရောင်ပိုးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း tempered gl ...
HONGYA Silk-SCREENED GLASS ဖော်ပြချက်- ခဲ-မပါသော စခရင်-ထုတ်ထားသော အကြမ်းခံသောဖန်သည် အရောင်ကြွေကြွေလွှာနှင့် ပုံစံပြုထားသော အပြာရောင် သို့မဟုတ် အလင်းဝင်သည့်ဖန်ဖြစ်သည်။ ပုံစံကို အထည်အလိပ်စခရင်ကို အသုံးပြုထားသည်။ အသုံးပြုထားသောကြွေလွှာများတွင် ခဲ၊ ကဒ်မီယမ်၊ ပြဒါး သို့မဟုတ် ခရိုမီယမ် VI ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသောသတ္တုများ မပါဝင်ပါ။ ကြွေလွှာကို အလွန်မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် လွှတ်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ဖန်မျက်နှာပြင်သို့ ပေါင်းစပ်သွားသောကြောင့် ထူးခြားသော ကြာရှည်ခံသော HONGYA Silk-SCREENED GLASS PERFORMANCE PARAMETER- 1) Facades- ပေါင်းစပ်...
လက်ကား ဆေးဆိုးပန်းရိုက် Tempered Glass Lamp C...
အဝိုင်း/စတုရန်း/စတုဂံ 2mm 3mm 4mm 5mm Frosted Glass Light Cover ကို လုပ်ဆောင်ရန် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ် materail ကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် အမျိုးမျိုးသော အထူနှင့် အရွယ်အစား မှန်များကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ tempered glass၊ led lighting cover glass၊ silk screen print glass၊ anti glare glass၊ anti reflective glass၊ ၎င်းတို့အား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမှန်၊ TV/ LCD glass၊ led lighting glass အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ etc ကုန်ပစ္စည်းအမည် အဝိုင်း/စတုရန်း/စတုဂံ 2mm 3mm 4mm 5mm Frosted Glass Light Cover Glass Material Ultr...
Teleprompter glass 60/40 Beam splitter glass op...
Beamsplitter glass သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော နည်းပညာမြင့်မှန်မှန်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မှန်ရဲ့တစ်ဖက်က တောက်ပြောင်နေပြီး နောက်တစ်ဖက်က အမှောင်က မှောင်နေပေမယ့် နောက်တစ်ဖက်ကို မကြည့်နိုင်တာကြောင့် အကဲခတ်သူတွေက တည့်တည့်မြင်နိုင်ပေမယ့် တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် လူတွေမြင်နိုင်တဲ့ ပုံမှန်မှန်တစ်ခုပါပဲ။ . ကုန်ပစ္စည်းအမည် Tempered low iron one way mirror glass Thickness 1.5mm,2mm,2.8mm,3mm,3.2mm,4mm,6mm Max Size...
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့် စိတ်ကြိုက် Teleprompter မှန်မှန်
Autocue/ teleprompter spectroscope အတွက် Glass...
အဆောက်အဦ ရောင်ပြန်မှန်၊ အပြာရောင် ကြေးမီးခိုးရောင် Gr...
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်- 1.Reflective Glass သည် ဗိသုကာပညာရှင်၏ ဒီဇိုင်းများကို ဖြည့်စွက်ရန် ဆန်းကြယ်သော အရောင်အသွေးများစွာဖြင့် လာပါသည်။ ဖန်သားပြင်နံရံအတွက် သင့်လျော်ပြီး သတ္တု၊ ကွန်ကရစ်၊ ကြွေပြားများ၊ ဂရန်းနစ်နှင့် အခြားသော ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ကောင်းစွာရောစပ်ထားသည်။ 2. ရောင်ပြန်၏ကြေးမုံအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကောင်းစွာပေါင်းစပ်ပြီး နေ့၏အချိန်အမျိုးမျိုးတွင် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အရည်အသွေးမြင့် 4-10mm ကြေး၊ မီးခိုးရောင်၊ အပြာရောင်၊ အစိမ်းနှင့် ပန်းရောင်ရောင်ပြန်ဖန်ခွက် အရောင် ကြည်လင်သော၊ ပန်းရောင်၊ ပြင်သစ်အစိမ်းရောင်၊ အစိမ်းနုရောင်၊ အလင်း bl...
ကြည်လင်သော round tempered step ရှေ့မှန်မီးအဖုံး...
အဝိုင်း/စတုရန်း/စတုဂံ 2mm 3mm 4mm 5mm Frosted Glass Light Cover ကို လုပ်ဆောင်ရန် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ် materail ကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် အမျိုးမျိုးသော အထူနှင့် အရွယ်အစား မှန်များကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ tempered glass၊ led lighting cover glass၊ silk screen print glass၊ anti glare glass၊ anti reflective glass၊ ၎င်းတို့အား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမှန်၊ TV/ LCD glass၊ led lighting glass အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ etc ကုန်ပစ္စည်းအမည် အဝိုင်း/စတုရန်း/စတုဂံ 2mm 3mm 4mm 5mm Frosted Glass Light Cover Glass Material Ultra...
UV Reflector Quartz coated Quartz glass Cold mi...
သတ်မှတ်ချက်များ UV ရောင်ပြန်အအေးမှန် ရောင်ပြန် 1. UV ရောင်ပြန်အနိမ့် အပူချိန် 2.various size of uv filter 3.Quartz material UV reflector Quartz coated Quartz glass Cold mirror Reflector for UV curing machine Quick view: UV reflector cold mirror reflector 1. UV reflector for အပူချိန်နိမ့် 2.various size of uv filter 3.Quartz material Quartz glass သည် single silicon dioxide ၏ အထူးဖန်ခွက်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းသည် နိမ့်သောအပူဓာတ် ချဲ့ထွင်မှု၊ အလင်းပြန်သွင်းနိုင်မှု ၊ ကောင်းမွန်သော ဓာတုဗေဒ...
Studio Pro Glass Rectangle Beveled Ultra Clear...
ကုန်ပစ္စည်းကို ဘောင်ခတ်ထားသော မှန်အပိုင်းအစများကို ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ- ကြည်လင်သော၊ ပိုရှင်းသော၊ အနိမ့်သံမှန် အထူ- 3-19mm အရွယ်အစား- စိတ်ကြိုက်ပုံစံ- အဝိုင်း၊ စတုဂံ၊ ပုံမှန်အပူချိန်- 50x50mm ဧရိယာရှိ အမှုန် 60 ကျော် ပုံနှိပ်ခြင်း- အနက်ရောင်၊ သို့မဟုတ် pantone ကတ်အတိုင်း ထုပ်ပိုးခြင်း- စက္ကူအလွှာပါရှိသော polywood case ဖြင့် ပစ္စည်းရှင်းလင်းသော float glass၊ အလွန်ရှင်းလင်းသော float glass (သံနိမ့်မှန်)၊ frosted glass (acid etched glass)၊ sandblasting glass၊ ကြေးဝါဖန်၊ မီးခိုးရောင်ဖန်၊ ပုံစံပြုလုပ်ထားသော မှန်၊ borosilicate glass၊ cera...
5mm 8mm 12mm အထူ 6mm 10mm tempered glass
5mm 8mm 12mm အထူ 6mm 10mm tempered glass 5mm 8mm 12mm အထူ 6mm 10mm tempered glass price5mm 8mm 12mm အထူ 6mm 10mm tempered glass price5mm 8mm 12mm အထူ 6mm 10mm tempered glass ဈေးနှုန်း 5mm 8mm အပူချိန် 12mm အထူ 12mm ဈေးနှုန်း glass 5mm 8mm 12mm အထူ 6mm 10mm tempered glass price5mm 8mm 12mm အထူ 6mm 10mm tempered glass price5mm 8mm 12mm အထူ 6mm 10mm tempered glass ဈေးနှုန်း 5mm 8mm 12mm အထူ 6mm 10mm tempered glass ဆိုသည်မှာ ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဆင့်ကို မြင့်တင်ကြပါစို့
Qingdao Hongya Glass Co., Ltd ကို 1993 ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ Qingdao City တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြည်လင်သော float glass၊ အထူးကြည်လင်သောဖန်၊ အရောင်ပြန်မှန်၊ အက်ဆစ်ထွင်းဖန်များကဲ့သို့သော စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်မှုမှန်အမျိုးမျိုးအတွက် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ , loweglass, mirror glass, tempered glass, laminated glass.
insulated glass၊ AR coating glass၊ fire-rated glass၊ Borosilicate Glass၊ Ceramic Heat-resistant Glass၊ Aluminosilicate Glass၊ Anti-glare Glass၊ Anti-reflective glass၊ Glass Tube၊ Sight Glass၊ Solar Pattern Glass၊ Quartz glass၊ ပရိဘောဂမှန် စီးရီး ၊Art Glass Series၊ Mirror Seriesetc.အဆင့်မြင့်တင်သွင်းထားသော စက်ကိရိယာများဖြင့် ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံနှင့် ဂိုဒေါင်၊ တန်ဖိုးအရှိဆုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရည်အချင်းများနှင့် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်။
Qingdao Hongya Glass Co., Ltd ကို 1993 ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ Qingdao မြို့၌ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်အမျိုးမျိုးအတွက် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
အကြည် float glass၊ အလွန်ကြည်လင်သောမှန်၊ အရောင်ပြန်မှန်၊
acid etched glass, loweglass, mirror glass, tempered glass, laminated glass၊
insulated glass၊ AR coating glass၊ fire-rated glass၊ Borosilicate Glass၊ Ceramic Heat-resistant Glass၊ Aluminosilicate Glass၊ Anti-glare Glass၊ Anti-reflective glass၊ Glass Tube၊ Sight Glass၊ Solar Pattern Glass၊ Quartz glass၊ ပရိဘောဂမှန် စီးရီး ၊Art Glass Series၊ Mirror Seriesetc.Own စက်ရုံနှင့် ဂိုဒေါင်၊ အဆင့်မြင့် တင်သွင်းလာသော စက်ကိရိယာများ၊ တန်ဖိုးအရှိဆုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရည်အချင်းများနှင့် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော မိတ်ဖက်များကို တိုးမြှင့်ပြီး ခိုင်မာစေမည်ဖြစ်သည်။
လိပ်စာ-အမှတ် 6၊ Zhangzhou လမ်း၊ Zhongyun ရုံး၊ Jiaozhou မြို့